Booliska Dalka Spain Oo Xidhay Tababaraha Caanka Ah Ee Jaamac Karaaciin | Berberatoday.com
Booliska Dalka Spain Oo Xidhay Tababaraha Caanka Ah Ee Jaamac Karaaciin
Spain(Berberatoday.com)-Booliska dalka Spain ayaa shalay xiray tababare Jaamac Adam Karaaciin oo tababare orodyahanno ay ka mid tahay Genzebe Dibaba oo Ethiopia u dhalatay oo haysata koobka orodka caalamka ee 1500 mitir.
Jaamac Karaaciin ayaa lala xidhay nin kale oo tababare Marooco ka soo jeeda, waxaana xadhigoodu yimid kadib markii booliska ay xoog ku galeen hotelka ay daganaayeen iyaga iyo ciyaartoy kale, halkaasi oo laga helay nooc ka mid ah daroogada mamnuuca ah ee kordhisa awoodda jirka ciyaartoyda.
Xidhiidhka ciyaaraha fudud ee adduunka ayaa sheegay inay darooggadan ka baadheen 28 qof oo ka mid ahaa 30 ciyaarahan oo hotelkaasi daganaa.
Jaamac Karaaciin ayaa la sheegay in tan iyo 2013 uu sannad walba tababar ku qabto halkaasi.
Wargeyska the Telegraph ee Britain ka soo baxa ayaa sheegay in orodyahanka Britain ee Asalkiisu Soomaaliga yahay Mo Farah uu iska fogeeey.